श्रवण र विप्लवः दुई भोजपुरे कविको सहयात्रा - म्यागेजिन - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
०४६ सालको जनआन्दोलनपछि काठमाडौंमा भयो दुई कविको भेट, अनि सुरू भयो मित्रता
रोहेज खतिवडा काठमाडौं २७ साउन
कवि श्रवण मुकारुङ र विप्लव ढकाल
त्यसरी संयोगपछिको संयोगमा यो मौका जुरेको थियो।
र, अचानक कवि श्रवण मुकारूङलाई सोधेँछु– ‘कवि विप्लव ढकाल, नेपाली कविता जगत्मा कस्ता कवि हुनुहुन्छ?’ यसरी मुक्त अनुभूतिको नवौं शृङ्खलामा कविता—विमर्श सुरू भयो।
एक भोजपुरे कविको नजरमा अर्को भोजपुरे कवि
मुक्त अनुभूतिको पहिलो शृङ्खलामा एउटा ‘थिम’ थियो– धरानका तीन कवि। त्यसपछि हामीले त्यस्तो संयोग जुराएनौं, आफैँं जुर्दै गयो। यसपटक संयोगले दुवै भोजपुरका कवि पाएका थियौं। कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा मेरो जिज्ञासा उहाँहरूको भेट र परिचय कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहयो।
त्यो समय सम्झिँदै ढकाल भन्छन्, 'मैले श्रवणलाई कविताका माध्यमबाट भोजपुरमा चिने पनि व्यक्तिगत रूपमा काठमाडौं आएपछि नै चिनेको हुँ। वि.सं. २०४६ सालतिर काठमाडौंमा उहाँको र मेरो भेट भएको हो। त्यसपछि सुरू भएको मित्रता अहिलेसम्म जारी छ।'
त्यसपछि दुवै कवि एकअर्काको फ्यान भएका छन्। मैले माथि उल्लेख गरेको प्रश्नको जवाफमा कवि विप्लव ढकाललाई अहिलेको समयको प्रतिनीधि नेपाली कवि देख्ने मुकारूङ भन्छन्, “त्यसपछि समय सयममा कहिले म उहाँको फ्यान हुने, कहिले उहाँ मेरो फ्यान हुने। कहिले मैले उहाँलाई यो समयको प्रतिनिधि कवि देख्ने, कहिले उहाँले मलाई यो समयको प्रतिनिधि कवि देख्ने। यो क्रम चलिरहेकै छ। हेरौँ, कहाँ पुगिन्छ।”
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई मिथक बनाइएको छ। यसो पनि भनिन्छ, ‘उनी बोल्दा पनि कवितामै बोल्थे रे।’ श्रवणको यो जवाफ सुनेपछि लाग्यो, यसरी मिथक बन्दा रहेछन् राम्रा कविहरू। उनको यो जवाफ एउटा कविताजस्तै थियो, विम्ब र लय भएको।
कवितामा राजनीति कति हुन्छ?
अहिले लेखिने नेपाली कविताको मूलस्वर राजनीति हो। यस्तै कविता बलिया हुन्छन्।
सुन्नुपर्छ। राजनीतिज्ञहरूले जब स्रष्टाहरूको आवाज सुन्न छोड्छन्, तब जनताले दमन महसुस गर्छन्। स्रष्टाहरूले सपना देखेको बाटोमा हिँड्ने राजनेताहरूले देशलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउन सकेका छन्।
फागुन चैतलाई आन्दोलनको मौसम भनिन्छ नेपालमा। सात साल, छत्तीस साल, ४६ साल, ६२/६३ साल, सबै आन्दोलनले यस्तै सङ्केत गर्छन्। यो कार्यक्रम भइरहँदा बाहिर आन्दोलन चलिरहेको छ र हामी कविता विमर्शमा छौँ। शिल्पी थिएटरको गोठाले नाटकघरमा।
प्रकाशित २७ साउन २०७४, शुक्रबार | 2017-08-11 14:38:27
रोहेज खतिवडाबाट थप